ITekhnoloji yoMnyhadala weeNtshatsheli ze-IMEX ngeNtsebenziswano eNtsha ye-MB
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » ITekhnoloji yoMnyhadala weeNtshatsheli ze-IMEX ngeNtsebenziswano eNtsha ye-MB
IMEX kunye noMnyhadalaMB
I-EventMB ibizwa ngokuba yi-IMEX's Official Tech Media Partner. Ubambiswano lonyaka wonke lubandakanya iseshoni yemfundo kwi-IMEX yaseMelika kunye nengxelo enzulu yeendlela zokujonga umhlaba oguqukayo wokuqamba izinto ezintsha, uyilo lomnyhadala kunye nobuchwepheshe.
Ijolise kubacwangcisi beenkampani kunye ne-arhente, i-masterclass yokucwangcisa umcimbi isetelwe ukubonelela ngendlela esebenzayo yokucwangcisa, ukuthengisa, kunye nokuhanjiswa kweziganeko.
Izifundo zophando ziya kusetyenziswa kunye notshintshiselwano lwezona ndlela zingcono zokusebenza.
Ingxelo eqhubekayo ilandela kamva kulo nyaka eya kuthi iphonononge ukubandakanyeka koluntu ngehlabathi elibonakalayo letekhnoloji ye-3D kunye neVR.
Ubambiswano lweQela le-IMEX kunye noluntu olukhulu lwabacwangcisi beminyhadala lusungulwa kwihlabathi liphela IMEX yaseMelika, eyayingoNovemba 9-11, kunye nokufunda ngokusebenzisana. I-EventMB Event Innovation Lab™ iqhubeka NgoMvulo olungileyo, inikwe amandla yiMPI, i-IMEX yaseMelika yosuku olupheleleyo lwemfundo yasimahla eyenzeka ngosuku olungaphambi komboniso we-8 kaNovemba.
Ijolise kubacwangcisi beenkampani kunye ne-arhente, i-masterclass yokucwangcisa umcimbi imiselwe ukubonelela ngendlela esebenzayo yokucwangcisa, ukuthengisa, kunye nokuhanjiswa kweziganeko, usebenzisa izifundo kunye notshintshiselwano lweendlela ezilungileyo.
Ingxelo eqhubekayo ilandela kamva kulo nyaka eya kuthi iphonononge ukubandakanyeka koluntu ngehlabathi elibonakalayo letekhnoloji ye-3D kunye neVR. Ingxelo iya kunika iinkcukacha ngendlela ubugcisa obuyinyani nobuxubeneyo obuchitha ngayo imiqobo yendlela uluntu oluzibandakanya ngayo kunye nokuba oku kungasetyenziswa njani kwimisitho yazo zonke iintlobo.
UCarina Bauer, i-CEO yeQela le-IMEX, uthi: “Siyazi ukuba imeko yetekhnoloji iye yavela ngaphaya komlinganiselo ukusukela kubhubhane. Uluntu lwethekhnoloji yesiganeko lunolutsha entliziyweni yalo kwaye lumiselwe ukudlala indima ebalulekileyo ekubuyiseleni nasekuhlaziyweni kwecandelo leziganeko zoshishino. Sijonge phambili ekusebenzisaneni ne-EventMB ukuze sabelane ngeyona ndlela isebenzayo kunye nokuxhasa ezo nkampani zenza amaza kwishishini lethu. ”
UMiguel Neves, umhleli oyintloko we-EventMB, wongeza: “Ukusebenzisana ne-IMEX kuyinto eqhelekileyo kwi-EventMB. Sobabini sikhathala kakhulu malunga neshishini lomnyhadala kwaye sabelane ngokuthanda izinto ezintsha. I-IMEX ixesha elide ikhulise icandelo letekhnoloji yomnyhadala, kubandakanya ukunceda abaqalisi bangene kwimarike, into leyo i-EventMB ibikhe yadlala indima kuyo ngaphambili. Kuhle ngoku ukwenza ubambiswano lwethu lube sesikweni kwaye ube nguMlingane osemthethweni we-IMEX weTech Media. Ndijonge phambili ekusebenzeni kunye kwiindlela zokulwela itekhnoloji exhasa ishishini lethu elinomdla. "
I-IMEX America yenzeka ngo-Novemba 9-11 eMandalay Bay eLas Vegas nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Ukubhalisa-mahala-cofa indawo Apha. Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe malunga nezivumelwano ngendawo yokuhlala kunye nokubhukisha, cofa Apha.